Ny fampiharana iPad 10 tiako indrindra | Vaovao IPhone
Ny iPad Apps 10 tiako indrindra
Tapitra ny taona 2012, taona nahitantsika ny iPad Mini sy ny iPad Retina roa "teraka", ary fotoana mety izao hijerena izay nomen'ny AppStore antsika ho an'ny fitaovantsika. Azo antoka fa efa nametaka fampiharana am-polony (na an-jatony) isika rehetra, ary amin'ny farany dia mamela ampahany kely amin'ny iPad isika ary tena mampiasa ... 20? Mety misy maro. Izany no mahatonga ahy mieritreritra fa mety ilaina ny manangona ireo izay ny fampiharana iPad 10 tiako indrindra. Mazava ho azy fa fampiharana natao ho an'ny besinimaro izy ireo, fa tsy fampiharana mifantoka amin'ny lahasa manokana.
Tsy misy isalasalana, ny iray no mitana ny toerana voalohany dia Tweetbot. Nidina an-tanana ny mpanjifa Twitter tsara indrindra, tena fahagagana ho antsika izay mampiasa fatratra ity tambajotra sosialy ity ary ho antsika izay tsy mampiasa. Kaonty marobe, fampifanarahana eo anelanelan'ny fitaovana, fampidirana am-serivisy toa ny Pocket, bit.ly, Readability ... Fahafahana mitantana ny serivisy Twitter amin'ny kaontinao Twitter, misakana sy mampangina ireo mpampiasa sasany, mitantana lisitra. Mahatalanjona fotsiny. Izy io dia mendrika hatramin'ny denaria farany, tsy misy isalasalana.
Mihetsika kely izahay ary mahita Pocket, fampiharana tsara ho an'ny vakio avy eo izay tsy azonao vakiana izao. Mijery ny fizotry ny Twitter-nao ianao dia mahita vaovao mahaliana anao nefa tsy manam-potoana, na lahatsoratra ao amin'ny Internet-nao ary tsy afaka mijanona mamaky azy ianao, satria tsindrio ny bokotra iray ary dia izay , efa anananao ao amin'ny Pocket izany hamakiana azy any aoriana, isaky ny afaka. Fampiharana maimaim-poana sy serivisy maimaimpoana. Tena ilaina.
Miova fahatelo isika, ary izao dia mankany fampiharana hanamorana ny asantsika, toy ny GoodReader. Raha mitady rindranasa mamela anao hijerena antontan-taratasy saika endrika (PDF, Microsoft Office, iWork), sary sy horonan-tsary ianao, miaraka amin'ny fahafaha-mampifandray ireo rafitra fitehirizana rahona (Dropbox, SugarSync, SkyDrive, Google Drive ...) io no safidinao. Ary koa, na dia tsy mamela ny fanovana aza ny rindranasa, dia mamela anao hanokatra ny antontan-taratasy amin'ny rindranasa hafa izy io hanovana azy. Tena "antsy miaramila soisa".
Ny isan'ny mpampiasa sy ny tenimiafina ampiasainay dia mitombo, ary tsy afaka mampiasa ireo mitovy foana izahay, ankoatry ny tsy fanoroana hevitra antsika hanao izany. Noho izany, ny fampiharana toa 1Password tena zava-dehibe izy ireo. Ity fampiharana ity, nohavaozina tanteraka vao haingana, mamela anao tahirizo ny mpampiasa sy ny tenimiafinao ampiasainao, amin'izay tadidinao mora foana izy ireo. Mazava ho azy, ny atiny dia voaharo ary voaaro amin'ny tenimiafina, noho izany dia tsy mila miahiahy ianao sao hianjera amin'ny tanana hafahafa. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny fampiharana Mac amin'ny alàlan'ny iCloud na Dropbox.
Fampiharana an-tsary maro dia maro, ary efa nanandrana ny maro tamin'izy ireo aho, fa ny tsara indrindra amin'izy rehetra, tsy isalasalana fa Camera +. Hatsarao ny fampiharana fakan-tsarimihetsika iOS Camera, manampy safidy bebe kokoa amin'ny fakana sary, ary mamela anao hanova ny sary ihany koa. Ampifandraisina amin'ny Flickr sy Facebook, azonao atao ny miditra amin'ny sarinao rehetra amin'ny kaonty roa, misintona sy manova azy ireo, ary mampakatra azy ireo indray. Fahagagana kely ho an'ireo mpankafy sary.
Ary mameno ilay teo aloha dia hitantsika ny PhotoSync. Io fampiharana tena tsara io dia mamela anao hamindra amin'ny alàlan'ny Wifi na Bluetooth misy sary na horonan-tsary anananao amin'ny iray hafa fa napetrakao ny rindranasa, ary satria ankoatry ny iOS dia misy izany ho an'ny Mac sy Windows, ny famindrana ireo sary amin'ny solosainao na avy aminy dia tsotra be, tsy mila tele na iTunes.
Ampidiro ny faritra "Leisure" ary eto no tena mpilalao fototra Plex, fampiharana mahafinaritra mamela anao jereo amin'ny iPad-nao ny atiny multimedia rehetra anananao amin'ny solosainao, na amin'ny kapila ivelany zaraina amin'ny tamba-jotra, misaotra ny mpizara azonao apetraka amin'ny solo-sainanao. Tsy miova intsony ny sarimihetsika, na mandrindra ny iTunes hijerena azy ireo, Plex no manao anao.
Ny fijerena fahitalavitra amin'ny iPad dia zavatra matetika kokoa amin'ny trano maro, noho ny kojakoja na fampiharana toa ny Zattoo. Maimaimpoana tanteraka, mangataka anao hisoratra anarana amin'ny tranokalany fotsiny izy, ary ho setrin'izany dia ho afaka mankafy ireo fantsona ankapobeny ianao (afa-tsy ny Antena 3) sy ny fanampiny fanampiny, amin'ny kalitao tsara amin'ny ankapobeny ary miaina. Ampirisihina mafy.
Ary izahay dia mamonjy ny lalao ho an'ny farany. Voalohany ho an'ny kely indrindra amin'ny trano, ho ahy, ny fahitana lehibe amin'ity taona ity: Aforeto. Lalao mampihomehy izay ahafahanao mamorona sary nohetezanao, pirinty izy ireo ary afaka mamorona sary 3D tena izy. Manana modely efa nomanina izy io, fa ny famoronana anao manokana dia tena mora, azonao zaraina amin'ny mpampiasa hafa koa izy io.
Ary araka ny filazan'izy ireo, farany fa tsy farany, ny iray ho ahy dia ny lalao amin'ny taona: Modern Combat 4. Lalao FPS hafakely, amin'ny endrika Call of Duty madio indrindra, miaraka amin'ny sary mahazatra ny tsara indrindra amin'ny console, ary lalao tena tsara na eo aza ny fanaraha-maso ny iPad. Raha tianao ireo lalao ireo dia tsy maintsy tratranao izany, ho tianao izany.
Ity no lisitra misy ahy, izay mety hitovy amin'ny anao na tsia. Inona ny fampiharana iPad tianao indrindra? Zarao izy ireo, antoka fa mbola tsy mahafantatra ny sasany amintsika.
Fanazavana fanampiny - Tweetbot dia azo alaina amin'ny iPad izao, 1Password 4 ho an'ny iOS miaraka amin'ny fanavaozana tanteraka alohan'ny 13 Desambra, Vaovao farany amin'ny Camera + ho an'ny iPad, Plex milalao endrika video amin'ny iPad-nao, Foldify ho an'ny iPad dia ahafahanao mamorona sary nohetezana 3D mahafinaritra, Combat Modern 4: Zero Hour, mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny iPad Apps 10 tiako indrindra
Francisco Martin Reyes dia hoy izy:
Heveriko fa mandany vola be loatra amin'ny AppS tsy misy dikany ianao, misy ny fisoratana anarana maimaimpoana izay manao izay voalaza rehetra ao amin'ireo karama ireo ary tsy manan-javatra hitsiriritra izy ireo. Fikarohana sy fitsapana kely fotsiny io. Mandany 6,95 amin'ny fampiharana iray hitehirizana ireo lakile manana maimaim-poana izay manao toy izany koa toa hadalana amin'ny fanajana feno.
Valiny tamin'i Francisco Martín Reyes
Luis_Padilla dia hoy izy:
Iza amin'ireo? Ho faly aho hijery azy io.
Mamaly an'i Luis_Padilla
Marc DL dia hoy izy:
Manatevin-daharana ny fanontaniana aho, satria rehefa avy nikaroka be dia be ny hany manome tolotra fiarovana dia izany.
Mamaly an'i Marc DL
1Password irery no mandeha tsara, tsara 😉
Ny lahatahiry. Maimaimpoana ary miaraka amin'ny teny miafina famitahana hanafina ny atiny mampandefitra, mandeha tsara izy io ary afaka mamonjy sary sy horonantsary voasedra koa ianao.
Neo dia hoy izy:
Misy ny rindranasa izay tsy dia tsara loatra, angamba raha mitahiry tenimiafina ianao fa tsy amin'ny fitantanana antontan-taratasy amin'ny .pdf. Raha ny marina, ho an'ny goodReader dia mila mandoa ianao, saingy Wow! Io no vola tsara apetraka, azoko antoka fa efa nanandrana karama sy maimaim-poana aho ary tsy misy toa an'io. Raha ny fanazavana, misy tutorial mampihoron-koditra ao http://www.ipadyapps.es Nanana fanontaniana aho ary valiany anao avy hatrany. Mbola mila manao zavatra tsara ianao.
Valiny tamin'i Neo
yesican dia hoy izy:
Misy olona afaka milaza amiko ve izay rindranasa ilaiko hisolo ny adobe flash player?
Mamaly an'i yesican
Tsy misy mahasolo azy. Adobe Flash Player dia efa nilaozana tamin'ny endriny finday avy amin'i Adobe mihitsy -
Mihidy Installous: manao veloma Apps Pirate Hackicious
Cycloramic, ilay fampiharana izay mamadika ny iPhone-nao, efa mamafa